Kharkiv National University of Radio Electronics, okuyinto othumele isithombe ngezansi, eyayaziwa Isikhungo Imayini Engineering (okufutshane - HIGMAVT). Eminyakeni embalwa kamuva, igama lalo lashintsha kwathiwa kuya laseKharkov Institute of Radio Electronics (ukuqasha).
Le nyuvesi has 34 zochwepheshe lapho ukufunda ezingaphezu kuka-13 eziyinkulungwane. Abafundi. Lesakhiwo kuhlanganisa 8 Umnyango lobuchwepheshe kanye Jikelele 1 Ezemfundo, 30 ethandwa kakhulu okwamanje ungusihlalo.
Labo abafuna ukuqhubeka nezifundo zabo ngemuva iziqu ungaya izifundo zobudokotela noma ye-postgraduate.
KNURE kanye nezinye izikhungo Ukrainian ezemfundo 2012 futhi ngo-2013 waklonyeliswa endaweni yokuqala ohlwini olusemthethweni Ministry of Education.
A amazwi ambalwa mayelana KNURE
Kharkiv National University of Radio Electronics (KNURE) - isikhungo okuveza tisebenti leticeceshiwe letinemakhono kakhulu. Le nyuvesi yasungulwa ngo-1930. Uthatha isinyathelo iminyaka engaphezu kwengu-70. E-Ukraine nakwamanye amazwe we nyuvesi ngezindlela eziningi bebakhulu okunamandla electronics, ukuxhumana, ubuchwepheshe kanye ababeqondisa nezinye izikhungo zemfundo. Nakuba izwe linenkinga ekuthuthukiseni IT-sphere, wakwazi ukugcina zonke ngaphambilini wazama futhi ihlolwe futhi ngempumelelo uyaqhubeka ukuthuthukisa eminye.
Kharkiv National University of Radio Electronics libhekene izinga okusezingeni eliphezulu ukuqeqeshwa. Lokhu kungenxa nje kuphela izincwadi ezintsha, izinsiza kanye nemishini. Isebenzisa othisha abaqeqeshiwe. Izinga ukuqeqeshwa abafundi kungahlolwa ku umsebenzi wabo emincintiswaneni nemincintiswano lapho ukunqoba imiklomelo.
Kharkiv National University of Radio Electronics (KNURE) enezinto eziningi imitapo, amakamelo ukufunda, amakilabhu ezemidlalo, amaqembu art amateur. Abantu abasha aletha uthando ulimi, umlando isimo, izincwadi zayo kanye art.
IKomiti nezokwamukela siqukethe Rector (noma kunalokho wakhe futhi. Mayelana., Njengoba esikoleni esiphakeme ukuthi ibingekho eminyakeni embalwa), umphathi, li umsizi, okuholela unjiniyela, kanye osolwazi eziningana, osolwazi umhlobo, Umqondisi-CDP.
Phakathi ikhomishana ezethula izicelo nonresident ukuthola ehostela.
Kharkiv National University of Radio Electronics abanakekela ekolishi abathweswe iziqu. Nsuku zonke labetibambile ukuhlolwa encane kukhompyutha isayensi ne ephakeme, ukuthatha abafundi inkambo ukuphahlazeka.
11 amakilasi abathweswe iziqu Unelungelo ukuthi uthumele isicelo ukufunda ephepheni noma ifomu electronic. In the ukungabikho imiphumela UPE (ngesizathu esihle) iyadingeka ukuze kudlule i interview, kokushiya okwangempela yonke imibhalo.
Uma umfundi specialist junior, t. E. iziqu zasekolishi noma esikoleni lobuchwepheshe, kwanele ukuba abhale isitatimende in ifomu ephepheni niketanani luhlolo yokungena kuphela isihloko iphrofayli.
Kharkiv National University of Radio Electronics idinga zonke eyala, ngaphandle the Faculty of Economic Cybernetics, izitifiketi UPE e izihloko ezilandelayo: ulimi Ukraine, izibalo (iphrofayli) ne-physics. Ukuze EC ngizodabula esikhundleni isihloko wesithathu indaba.
Le nyuvesi aphethwe zokuqeqesha minyaka eyenzelwe abafundi ababethweswa iziqu emakilasini. Lapha, hhayi kuphela ukukusiza ufunde mayelana software, kwezinye izilimi izinhlelo kanye sekharikhulamu ukulethwa VNO, kodwa futhi baqhuba izinkambo lesikhungo uqobo.
Labo abafuna babe izazi ezivelele emkhakheni computer isayensi ne, kufanele ukhethe laseKharkov National University of Radio Electronics. Iminyango azigcini isiqondiso lobuchwepheshe. Kuphinde kube khona izindawo abantu bakwamanye amazwe. Abakwazi ungenele ucwaningo Ukrainian, isayensi kanye ukuqeqeshwa ulimi.
Computer Engineering Nokuphathwa (CVU) kanye Mathematics Esetshenziswayo Nokuphathwa (PMM)
CVU has izindawo ezimbili: zokuvikela nekhompyutha zobunjiniyela. Inkinga labafundi - ukwakha izwe ikhompyutha, ukuthi kungaba smart. Ihehe CVU kungenziwa ngokuthi ezinikeza abafundi nenkululeko umcabango bese beveza isofthiwe ezahlukene zamadivayisi eselula kanye computer. Umnyango "abangane" nezinkampani ezifana Intel, Apple, i-Google.
Ngezinye Faculty of Mathematics Esetshenziswayo kanye Mechanics ukhetho odokotela wesayensi, academicians nothisha ezingaphezu kuka-100 abasebenza. Vumela abafundi ukusebenza laboratories lanamuhla inkinga ngamakhasimende. Uma wayefisa, umfundi angase bayoqeqeshwa e-Russia, eJalimane, e-USA, Sweden noma France.
Automation nekhompyutha ubuchwepheshe (ACP) ne-Computer Science (SC)
UMTHETHO silungiselela ongoti ekuphathweni zobuchwepheshe, ezobuchwepheshe, izinto zebhizinisi.
On the CN bangaqeqeshwa ngesikhathi impohlo, onguchwepheshe, zeMasters kanye eziqu neziqu zobudokotela. Khono ubusebenza ezingeni zesayensi kanye lobuchwepheshe. It kuvumela abafundi ukufunda e-Netherlands, UK, France, Germany, Russia nabanye. CN isebenza ezinkulu IT-izinkampani njengoba EPAM Systems, i-Microsoft-Ukraine, IBM nabanye.
Electronic Engineering (ET) nobuchwepheshe umsakazo (RT)
ET silungiselela Bachelors futhi amakhosi. Uyasebenzisana nezikhungo zemfundo OF AMERICA (Stanford University), eJalimane (University of Hannover, i-Institute for Solar Energy), futhi e-Italy naseSpain.
RT silungiselela Bachelors.
Kharkiv National University of Radio Electronics, ukulungiselela ochwepheshe best ezindaweni ezahlukene kabani okukhethekile ahlukahlukene. Iziqu bayindlala yizinkampani angaphandle.
Linani selilonkhe lebantfu labange neminyango 30:
wezibalo osetshenziswayo - abafundi bafunde ukuhlaziya izinhlelo, izifundo ezincane izinhlelo kanye mathematics isicelo.
Ulwazi lwezobuchwepheshe - ehlanganisa izindawo ezimbalwa computer science: kusukela graphic design ukufaka izinhlelo zokuthuthukiswa sewebhu.
Economic Cybernetics futhi Economic Security - Ivumela ukuba ufunde indlela yokuxazulula izinkinga zomnotho ngokusebenzisa ukusetshenziswa kobuchwepheshe obusha kanye nemishini ekhethekile lobuchwepheshe.
wezibalo Ephakeme - eMnyangweni wafundisa yonke inkambo wezibalo ephakeme esisiza abafundi ukuthuthukisa ukucabanga okunengqondo futhi zezibalo.
Komphakathi Informatics - omunye neminyango ethandwa kakhulu e-Ukraine. Ukukhishwa ukuze abahlaziyi futhi onjiniyela ulwazi.
amakhompyutha Electronic - igcizelelwa isifundo izinhlelo izakhiwo eyinkimbinkimbi obuhlukahlukene.
umklamo ikhompyutha abasizwa computer - abathweswa iziqu umnyango ezihilelekile kudalwa ikhompyutha virtual futhi kumadivayisi eselula, ukudala isofthiwe ehlukile.
Ukuphepha of Information Technology - ochwepheshe wahlanganyela ukuvikelwa izinhlelo kusukela ukwehluleka, amagciwane, futhi amathuluzi ukuthuthukisa ivikela esiphezulu.
Ifilosofi - UMnyango silungiselela abafundi ababeyizazi sphere zezombusazwe, zokuziphatha, zezenhlalakahle kanye nomphakathi.
Ukuphathwa kolwazi izinhlelo - Umnyango wahlanganyela izindlela zokufundisa sokuthuthukisa izinhlelo I-Web-izinhlelo.
Systems Engineering - we mfundi usethola ukuthuthukisa, ahlaziye, futhi silondoloze impilo izinhlelo ezibucayi adingekayo izinto zobuchwepheshe.
ubunjiniyela Software - ochwepheshe ayatholakala, akwazi zonke izinhlobo zokukhwabanisa software kusuka ukuthuthukiswa ukusekela software ngemva kokusiza abafundi bakhe abathengi yayo.
Artificial Intelligence - ekhiqizwa onjiniyela, abahlaziyi kanye nezinhlelo.
izinhlelo Abezindaba nobuchwepheshe - cwaningo Web-design, izindlela ngokudala amasu multimedia ukusingatha kahle izinhlobo ezahlukene kanye nezinhlobo izithombe.
Design kanye nokusebenza zobuchwepheshe - ngokukhethekile ekudaleni amadivayisi isofthiwe ukuphathwa nge inethiwekhi.
Physics - ihlanganisa yonke inkambo yokuhle physics, ezazifundiswa undergraduate eyunivesithi.
Ukuvikelwa Labor - ezazifundiswa uMnyango Lemvelo, ukuvikelwa zabasebenzi kanye ukuphila.
Ubuchwepheshe ezishintshayo ukukhiqizwa izinsiza umsakazo-electronic kanye ne-computing - bafundi ukwenza ekuthuthukisweni software emkhakheni ukuzilawula ngokuzenzekelayo futhi akude nge inethiwekhi, namanye amadivayisi.
imfundo Physical - ukubandakanya abafundi kwezemidlalo ahlukahlukene.
nobunjiniyela bezokwelapha - ngako okusekelwe ocwaningweni nokuxazulula izinkinga kwezokwelapha biology.
lezisekelo Physical of zikagesi - ochwepheshe etholakalayo kanye nabacwaningi ku ezokuxhumana kanye electronics kanye laser ubuchwepheshe.
Microelectronics - isifundo eningiliziwe nano- futhi microdevices, ukuthuthukiswa amadivayisi amasha.
Izilimi zakwamanye amazwe - ukuqeqeshwa uqhutshwa ngosizo izinhlelo eyingqayizivele, okuyinto ngokuyisisekelo yizingxoxo ikhompyutha.
izinhlelo Electronic - izitimela Ochwepheshe ezindaweni ezilandelayo: umsakazo, ezokusakaza kanye nabanye.
Kubaluleka Radio Engineering: Izindawo - Ukuvikelwa kolwazi nokucutshungulwa yayo
Radio ubuchwepheshe Imininingwane-zokuxhumana - ukuthuthukiswa izinhlelo eziyinkimbinkimbi emisebeni nethelevishini amadivayisi pulsed.
7. UMnyango ngoba izakhamuzi zakwamanye amazwe:
izifundo Ukrainian - isingeniso umlando isimo kanye nentuthuko yayo.
ukuqeqeshwa Ulimi - umsebenzi oyinhloko - ukufundisa abafundi ukuba ulidle isiRashiya futhi Ukrainian ezingeni elifanele.
isayensi yemvelo - othisha bafundisa izifundo ngokukhethekile athuthukile imiklamo.
Kharkiv National University of Radio Electronics: Izibuyekezo
Mayelana 90% amazwana mayelana betadisha KNURE ezinhle. Ulwazi zinhle, abafundi base kakhulu. Inzuzo Kuyaphawuleka ukuthi abafundi 3rd futhi 4th ngonyaka ahlele umsebenzi ehola IT-izinkampani.
Abaningi adunyiswe University ezingeni eliphezulu lokufundisa, amakamelo ikhompyutha ezinhle, abasebenzi iphendule. Ngaphezu ukuthi abathweswa iziqu pluses zihlanganisa yokuthi ngemva usuvele unayo nakho komsebenzi. Lokhu kusiza kakhulu ukuqashwa olwengeziwe. Kubalulekile nokukhumbula mayelana ezingeni efanele lamahhotela. Abafundi like ukubukeka kwabo futhi spaciousness. Ekamelweni lokudlela elisebenzayo futhi okusezingeni eliphezulu sezinga lomsebenzi okuphekiwe kahle.
Indlela ukuhlela zangasese e izindlu ezakhiwe ngokhuni